Diniho tsara ny antsipirian'ny fifanarahanao amin'ny alàlan'ny fanamarinana fifanarahana | Orinasa Mpampanoa lalàna
Diniho tsara ny antsipirian'ny fifanekena amin'ny alàlan'ny fifanarahana Vetting
Ny fifanarahana ara-dalàna na fifanarahana dia ampahany kely fotsiny amin'ny antontan-taratasy izay nosoniavin'ny antoko roa, fa miaro ny orinasan'ny orinasan-tena miaraka amin'ny zo sy fanafody. Ny fifanarahana iray dia miteraka adidy, fepetra, olana ara-bola, fetran'ny fotoana, sy ny maro hafa hany ka ny faritra rehetra amin'ny fifanarahana dia hofehezina tsara, izay, raha tsy mahomby dia mety hitarika fatiantoka tsy ampoizina.
Ilaina ny fanodinana ara-dalàna any Dubai sy UAE
fifanarahana ara-dalàna na fifanarahana
fanamafisana ny antontan-taratasy
Raha tsy mila hazoto amin'ny fanaovana vetting kontrak isika dia mety hanao sonia fifanarahana amin'ny fepetra tsy mahaliana izay tsy mahasoa anay na ny tombontsoantsika.
Inona no atao hoe Vetting Contract
Ny fifanarahana Vetting na Vetting ara-dalàna dia midika fa ny fihetsika mandinika tsara sy mandinika tsara ireo antontan-taratasy tokony hovonoina amin'ny lafiny lalàna. Ny fitsikerana ny fifanarahana dia mitaky fatratra tsara ny fifanarahana, izay miantoka izao manaraka izao:
Fanaraha-maso ara-dalàna ny antontan-taratasin'ny orinasa isan-karazany ataon'ny mpisolovava Torohevitry ny mpisolovava amin'ny raharaha saro-pady. Fanarahan-dalàna.
Ny fiarovana rehetra dia alaina
Famaritana ny andraikitra manokana
Ny olana mamaritra
Mazava ny lafiny sy ny vola, sns.
adidy sy andraikitra amin'ireo antoko rehetra voakasik'izany
Ny fifanarahana dia natao indrindra, namolavola ary novonoin'ireo orinasa avy amin'ny fomba fijery manamarika ny adidy sy ny andraikitra ataon'ny antoko rehetra voakasik'izany mba hanalefahana ny loza. Ny tompona orinasa madinika sy ny mpitantana antitra dia matetika mamolavola fifanarahana mandritra ny faharetany.
Satria ilaina ny fifanarahana vakiana, takatra ary hodinihina momba ny teny sy fitenenana ampiasaina ao amin'ny vatan'ny fifanarahana iray. Ilaina fa tsy misy fepetra tokony hidiran'ny teny artifisialy na hoe misy dikany fanampiny tokony hamboarina ankoatra ny takatra ara-bakiteny.
Fanamafisana sy fanamarinana ny fifanarahana matihanina
Noho izany, ilaina ny mandeha fitrandrahana ara-dalàna raha te-hamonjy ny tenanao amin'ny toe-javatra tsy ampoizina mety ho nesorina raha toa ka ny hetsika ara-dalàna ho an'ny fanodinana antontan-taratasy dia novonoina ara-potoana.
Mamono olona ny fampiasana ny takelaka / fifanarahana ara-dalàna na stereotype, ary noho izany dia ilaina ny manatona manam-pahaizana manokana momba ny lalàna afaka manao antontan-taratasy ara-dalàna sy ho an'ny fanakorontanana ny matihanina.
Asompara lehibe amin'ny fivarotana varotra
Ny fanakorontanana ny fifanarahana dia mitaky ny olona hanatanteraka fatratra ny finiavana, fehezan-dalàna, fisakafoanana, ary mety hampidi-doza ny fiarovana ny filàn'ny mpanjifa, ary hanamora ny fizotran'ny fifanakalozana.
Ny lalàna momba ny fifanarahana lehibe dia nalaina avy amin'ny lalàna fifanarahana anglisy, izay manome lanja mafy ny fanirian'ireo antoko mpifaninana mba hamatotra ny tenany amin'ny fifanarahana hifanakalozana orinasa na serivisy.
In Jones V Padavatton, dia notadiavin'ny fitsarana mazava tsara ny maha samy hafa ny fifanarahana eo amin'ny fianakaviana sy ny fifanarahana amin'ny orinasa. Ny fifanarahana ara-pianakaviana dia tsy mifamatotra foana ary ny fifanarahana fifanarahana dia tokony hiditra ao anatin'izy ireo ny tanjona ara-barotra. Noho izany, na dia voakapa aza ny fifanarahana, tokony hazava ny fikasana hifamatotra ara-dalàna amin'ny orinasa.
Manaraka avy any ambony dia ilaina ny manamarina fa ny antoko mankany amin'ny fifanarahana dia fantatra, ny fahefany hisolo tena ny orinasan'izy ireo samihafa sy ny fahaiza-manao fifanarahana ary ny toerana anaovan'ireo orinasa. Amin'ny toe-javatra izay misy antoko hatramin'ny 3 na mihoatra ny fifandraisana, ny hamafin'ny fandinihana dia mety ho henjana kokoa mba ahafahana mametraka ny tanjon'ny olona tsirairay.
Rehefa mamatsy ny tenany amin'ny orinasa ny antoko dia tsy maintsy mazava ny tanjon'ny fifanarahana.
Raha momba ny fivarotana soa, ny tanjona dia azo heverina fa ny "x" dia manamboatra sy mivarotra entana AB ary "z" no mpanamboatra XY izay fananana entana AB.
Ao amin'ny fivarotana tsotra ho an'ny tsena, izay misy manara-penitra ny vokatra dia mety ilaina ny famaritana voafaritra tsy tokony omena azy, fa amin'ny fomba fitandremana kosa dia mora ny manambara sy mamaritra ny "Goods", "Fety," "Purchase Order," "" Andro fanaterana, "" daty sy fomba fandoavam-bola, "'Toerana fandefasana," "fanafoanana," sns. Izany no miantoka ny hevitr'ireo teny ireo dia mitovy ny hevitr'ireo mpifaninana amin'ny fifanarahana ary mifanaraka tsara amin'ny fitakian'izy ireo.
Na izany aza, raha sarotra ny fepetra takiana namboarina manokana, toy ny vay, ny elektronika manokana, ny motera injeniera, sy ny sisa, dia ilaina ny hiantoka ny fanondroana ny tondro sy ny famaritana rehetra.
Taorian'izay dia tokony hanambara ny fepetra rehetra tokony hatao ny fifanarahana.
Inona no maha samy hafa ny fandrafetana ny fifanarahana amin'ny fifanarahana Vetting?
Drafitra roa samy hafa amin'ny fizotry ny fifanarahana ny fifanarahana amin'ny fifanarahana ary ny fifanarahana. Ny fandrafetana ny fifanarahana dia dingana iray izay mahasarika ny olona mandrafitra fifanarahana manomboka amin'ny teboka ka hatramin'ny farany.
Amin'ny fizotry ny fanarahan-dalàna ny fifanarahana dia ilay olona namorona no handinika ary hiasa amin'ny modely efa misy ny fifanarahana efa natao (ilay efa namboarina) mba hanao ny fanampim-pananana ilaina sy ny fahatapahana ao amin'ilay môdely efa misy.
mifantoka amin'ireo teboka tsy manam-paharoa ao amin'ny tempolin'ny fifanarahana efa misy
Ny matihanina miasa amin'ny orinasa sasany dia afaka handratra ireo fifanekena noho ny antony roa:
Na izany orinasa izany dia hanana ny modely fifanarahana azy manokana; ary
Counterparty mandefa ny maodelin'ny fifaneken'izy ireo mba hojerena.
Mandritra ny dingana fanao vetaveta dia voafetra ho an'ny matihanina ny làlan'ny fianarana satria mila mifantoka amin'ireo teboka tokana ao amin'ny tempolin'ny fifanarahana efa misy izy ireo ary tsy mahazo manantena ny hanao ilay asa voalohany.
fikarohana feno momba ny fehezanteny samihafa
Saingy, amin'ny lafiny fanoratana ny fifanarahana, ny olona mandrafitra dia mamorona ny fifanarahana rehetra amin'ny alàlan'ny tenany manokana ary mifantoka manokana isaky ny teboka isa-minitra manomboka amin'ny teboka hatramin'ny farany.
Ny fandrafetana ny fifanarahana dia mamela ny olona manao ny fandrafetana ny fahafahana hianatra ny zava-kanto momba ny famolavolana fanomezana amin'ny alàlan'ny fanomezana, ka ahafahana mikaroka amin'ny antsipirihany ireo andiany samihafa hianarana ny fika tsirairay.
Marihina fa ny saina ara-dalàna tanora dia mifantoka amin'ny fandrafetana ny fifanarahana amin'ny fianarana (mianatra ny asa voalohany) ka ho lasa mahay amin'ny fanaovana drafitra fifanarahana na fifanarahana amin'ny fifanarahana.
Fifanarahana ara-dalàna / fananganana varotra amin'ny orinasa
Mpanome serivisy momba ny fifanarahana asa sy fifanarahana amin'ny varotra any Dubai. Fanodinana ara-dalàna ny antontan-taratasy isan-karazany Fanomezana hevitra araka ny lalàna. Torohevitra momba ny raharaha saro-pady. Fifanarahana ara-dalàna.